Britain: R/wasaare Boris Johnson oo loo wareejiyay qaybta daryeelka xaaladaha culus – Banaadir weyne
Ra’iisul wasaare Boris Johnson, ayaa loo wareejiyay qaybta daryeelka xaaladaha culus ee cisbitaalka, kadib markii astaamahii xanuunka ‘coronavirus’ ee lagu arkay ay ka sii dareen sidaas waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska Downing Street .
Afhayeen u hadalay ayaa sheegay in kooxda caafimaadka ee Boris Johnson ay ku taliyeen in la geeyo qaybta daryeelka xaaladaha culus isla markaana uu haatan helayo daryeel caafimaad .
Afhyeenku waxa uu intaasi raaciyay in Mr Johnson uu ka codsaday xoghayaha arrimaha dibadda UK, Dominic Raab in uu shaqada sii wado qaybaheeda muhiimka ah .
Ra’iisul wasaraha oo da’diisu tahay 55 sano ayaa la dhigay cisbitaal London ku yaalla, gelinkii dambe ee Axaddii kadib markii lagu arkay calaamadaha xanuunka Corona.
Boqoradda ayaa si taako taako ah loola socodsiinayay hadba halka ay marayso xaalada Mr. Johnson sida laga soo xigtay aqalka boqortooyada UK ee Buckingham Palace.
Qoraal ka so baxay aqalka boqortooyada ayaa lagu sheegay: ” Gelinkii dambe ee isniinta xaaladda Raiisul wasaaraha ayaa ka sii dartay waxaana kooxdiisa caafimaadku ku taliyeen in la geeyo qaybta daryeelka culus ee isbitaalka.”
Hadalka oo sii socda ayaa lagu yidhi ” Raiisul wasaaruhu wuu ka soo reynayaa wuxuuna u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha waaxda caafimaadka ee NHS, shaqadooda iyo dedaalkooda.”
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Raab, wuxuu sheegay “waxaa jira” koox aad iyo aad u xoog badan isla mar ahaantaa u niyadsan ” oo gacanta ku haya ra’iisul wasaaraha.
Wuxuu intaas ku daray isaga iyo asxaabtiisu inay hubinayeen inay fuliyaan qorshayaasha Mr Johnson uu faray inay sida ugu dhakhsaha badan u soo gudbiyaan.
“Taasi waa habka aan dalka oo dhan ugu caddayn karno loollanka coronavirus,” ayuu yidhi.
Chancellor Rishi Sunak wuxuu sheegay in ducadiisu ay la jiraan ra’iisul wasaaraha iyo xaaskiisa uurka leh, Carrie Symonds, iyo in Mr Johnson “uu kasoo bixi doono tan xitaa isagoo sidiisii kasii xoog badan”.
Hogaamiyaha Xisbiga Shaqaalaha Sir Keir Starmer ayaa ku tilmaamay “war aad u xun oo naxdin leh”.
“Niyadda dadka waddanka oo dhan waxay la jiraan ra’iisul wasaaraha iyo qoyskiisa inta lagu jiro waqtigan aadka u adag,” ayuu raaciyay.
Mr Johnson ayaa markii hore loo qaaday cisbitaalka si loogu sameeyo baadhitaano joogto ah kadib markii laga helay cudurka loo yaqaan coronavirus 10 maalmood ka hor. Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ahaa heerkul sare iyo qufac.
Horraantii Isniinta, waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka inuu ku jiro “xaalad wanaagsan”. – Calanka Media